दीपा श्री सँगको कुराकानी :: फिल्मनेपाल डट कम
विवाहका लागि पछि लाग्नेहरु घटिसके:: दीपा श्री
रिल लाइफमा हास्य कलाकार दीपा श्री निरौला र दीपकराज गिरीको जोडी जमेको देख्दा धेरैले यिनीहरु साँच्चिकै श्रीमानश्रीमति हुन् कि क्या हो भनेर एकपटक पक्कै सोच्छन् । तर दीपा श्री अझै अविवाहित छिन् । तीतो सत्य, रामधँनियाजस्ता चर्चित हास्य कार्यक्रमकी कलाकार दीपा श्रीलाई विवाहले यो हिउँदमा पनि छुने नछुने अनिश्चितता छ रे । विवाहबारे उनीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानीः
साथीभाइ, इष्टमित्रहरुको विवाहमा व्यस्त छु । अहिले पनि म विवाहकै पार्टीमा छु ।
अरुको विवाहमा मात्रै जाने कि आफ्नो विवाह पनि खुवाउने ?
त्यही विवाहको लागि अनुभव संगाल्दैछु । हेर्दैछु कस्तो तामझाम हुँदोरहेछ भनेर ।
कस्तो हुँदोरहेछ त ?
मलाई वास्तवमा विवाहप्रति कहिल्यै आकर्षण भएन । अरुको हेर्दाहेर्दा तान्ला कि भनेको ।
त्यसोभए, विवाह गरुँगरुँ जस्तो लाग्न थालेको होला नि त ?
खैं, शुरुवात राम्रो देखिएको छैन । तर विवाह गर्न मनमा टुसा चैं पलाएजस्तो लाग्दैछ । तर यता -विवाह) नै व्यस्त भइयो भने चाहिं त्यही टुसा पनि मर्ने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।
तपाइँलाई विवाह गर्न मन किन नलागेको होला ?
काममै व्यस्त भएर होला । हाम्रो क्षेत्र यस्तो हो कि स-साना कुराहरुले पनि जीवनमा थुप्रै उतारचढाव ल्याइदिन्छन् । समकालीन कलाकारहरु थुप्रैको वैवाहिक जीवन दुखद भएको देखेकी छु । समाजमा यस्तो असफल वैवाहिक जीवन देखेर पनि इच्छा नजागेको हो कि ।
विवाहपछि अभिनय नै छोड्ने कुरा गर्नुभएको थियो । किन ?
हाम्रो फिल्म लाइन भनेको यस्तो हो कि रातविरात सुटिङमा निस्कनुपर्ने हुन्छ । सधैं सबैले बुझ्दैनन् । श्रीमान, बालबच्चा, परिवारलाई पूर्ण समय दिइएन, केयरिङ गरिएन भने दाम्पत्य जीवन सुखमय हुँदैन । सुखद वैवाहिक जीवनका लागि विवाहपछि कलाकारिता चटक्कै छोड्ने निर्णय गरेकी हुँ । जुनसुकै कामको जिम्मा लिंदा पूर्ण लिनुपर्छ । दुईटा नाउमा खुट्टा राखेर गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन ।
समाजका मूल्य मान्यता, विश्वास फेर्छु भनेर पर्दाबाट सन्देश छर्ने मान्छेले पनि हार खाँदोहेछ है ?
हार खाएको होइन । हाम्रो समाजमा जे जस्तो अभ्यास भएको छ त्यसबाट सतर्क भएकी हुँ । काम पनि कति गर्ने जस्तो लागेर पनि हो । परिवार, श्रीमान, बच्चालाई विचल्ली बनाएर त करियर बनाएको के काम भयो र ?
करियरमा लाग्दा परिवारको विचल्ली नै हुन्छ र ?
हुन्छ । पूर्ण रुपमा माया, प्रेम, केयरिङका कुरा श्रीमानसँग भएन भने मनमुटाब हुन्छ, हुन्छ ।
भनेपछि विवाह गरेर पूर्ण गृहिणी बन्ने ?
हो । दुवैतिरको लोभ नगर्ने । अभिनयको लोभले नै विवाहलाई पनि पर धकेलेकी हुँ ।
कहाँसम्म धकेल्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
त्यो त यसै भन्न सकिन्न । सब उपरवालेका खेल हे ।
वर नपाएर कतै तपाइँले पूर्ण गृहिणी भएरै बस्छु भन्नुभएको त होइन ?
होइन । वान्टेड विज्ञापन गरेकी होइन । अहिले पनि १० जना लाइनमा छन् ।
घटेछन् नि होइन ?
घट्ने भइहाले नि । मसँगैका सबैले घरजम गरेर बसिसके । आफूभन्दा भाइहरुसँग विवाह गर्ने कुरा भएन । जेनरेसन चेन्ज भयो नि त ।
sagar purkoti भन्नुहुन्छ:
deepa ji aba pani timeloss garnu vayo vane pa6uto matra rahane6 jibanma,sabai haso khusiharu kalpana ma simit narahos hai thanks